पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्छ : नेता जोशी
बुधबार, १ जेष्ठ, २०७६
दमौली । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले पार्टीका हरेक नेता तथा कार्यकर्ताले सङ्गठन सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा काङ्ग्रेस तनहुँले भिमादमा आज आयोजना गरेको क्षेत्र नं २ स्तरीय भेलामा उनले पार्टीभित्र उचित व्यक्तिलाई उचित भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
गत वैशाख २५ गतेदेखि शुरु भएको जागरण अभियानअन्तर्गत तनहुँ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा काङ्ग्रेसले भेला आयोजना गरेको छ । काङ्ग्रेस तनहुँका सचिव लक्ष्मी आचार्यका अनुसार क्षेत्र नं. १ को भेला जेठ २ गते बन्दीपुरको डुम्रेमा आयोजना गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै नगर तथा गाउँस्तरीय भेला जेठ १५ गते शुक्लागण्डकीको दुलेगौडामा, जेठ १६ गते भानुमा, जेठ १७ गते रिसिङमा, जेठ १८ गते घिरिङमा, जेठ १९ गते देवघाटमा, जेठ २० गते आँबुखैरेनीमा, जेठ २१ गते म्याग्देमा, जेठ २२ गते बन्दीपुरमा, जेठ २३ गते भीमादमा र जेठ २४ गते व्यास नगरपालिकामा हुने आचार्यले जानकारी दिए । (रासस)
सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको सुझाव, जातीय विभेद अन्त्य गर्न थर बदल्न प्रस्ताव
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले फेरि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि संसदमा चलिरहेको छलफमा सहभागी हुँदै डा. भट्टराईले कालो सेत
औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी ७) को बैठक स्थगित
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी७) को शिखर सम्मेलन कम्तीमा आगामी सेप्टेम्बरसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
बजेट महत्वाकांक्षी नभए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बो